Umhla My Pet » angel Cats
ngokuthi Linda Anderson
ukubuyekezwa: Apr. 05 2020 | 4 min ukufunda
Ngaba ngokwenene iikati usithanda, okanye ngaba nje umthombo ukutya kwabo?
A Human wetoti
Ayikwazi umxelela sinithanda ukusuka kwindlela ukukulandela macala, ukutsiba kwi esifubeni sakho xa ubuncinane ubunokulindela, kwaye purr naxa itís na dinnertime? Kanjalo, sinithanda ngakumbi emva youíve kuthi banikwa ukutya kwethu cat okuthandayo!
Mommas yi nguKiti nozithobela tiger bahlinza entle. Xa simfumanayo, wayekhulelwe kwaye sele kakubi Ó zingenamntu yena Amantshontsho bayo esitratweni. Mna kunyaka wam wokuqala kwikholeji xa abazali bam wathabatha Mommas and Persephone, le catís amshiye enye baby eseleyo. Sa bulela ngobukho babo. Thorndike, ikati yethu kwiminyaka elishumi elinesihlanu, kutshanje safa. intlungu yethu ngenxa yokufelwa kuye kakhulu, kwaye didnít ufuna ukuqhubeka abahlala kwikhaya catless. Esizisweleyo oko kubiza uthando inoboya,
ingakumbi kuba yayindim kuphela umntwana uhlala ekhaya emva oodade bam ababini abakhulileyo kukhutshelwa ngaphandle. Ukuze ithamsanqa wethu olungileyo, Mommas nentombi yakhe yaba neengcali kummandla cat psychology; babesazi ukuba anyamekele peopleís neemfuno ngokweemvakalelo.
Mommas ezuzwe igama lakhe ngokwamkela abazali bam kunye nam ngokungathi amantshontsho. Kungekudala emva esiza ekhaya kunye nathi, Mommas baqalisa ukumlandela kuthi macala ukuze sibone oko ukuya kwi. Nanini na kuthi bakhala, Mommas wahlala ezinyaweni zethu waza walinda ngomonde ade akwazi ukulawula uthando lwakhe nentuthuzelo.
Emva kweminyaka yokuphila kwidolophu enye, abazali bam bafudukela Pennsylvania kunye Mommas kwaye Persephone, lo gama mna noodadewethu wasalela Massachusetts. Utata wam kwakuthetha yonke kum, kwaye yinto yokugqibela bendiya owakhe ndifuna kuye ukuba afe yedwa. Kodwa ubusuku enye, uloyiko lwam imbi kwabonakala ukuba kuzaliseka. oodade bam kufika emnyango yam iindaba buhlungu kakhulu: Umama wethu Bamemeza ukubaxelela ukuba sheíd ukuza ekhaya ukufumana ubawo elele kwigumbi lokuhlala ?indlebe; athi, elityhutyhile kude xa ubukele umabonwakude. Qabu, nangona, oodade bam wathi utata eyayingazange yedwa ngamaxesha yokugqibela yobomi bakhe. Umhlobo ziintanda ababenaye: Mommas.
Mommas abe fatherís ulidlelane rhoqo xa umama wahamba umsebenzi wakhe. Ebusuku ukuba Wamfumana ubuthongo obungunaphakade, Kwakhona wafumana Mommas ehleli ecaleni kwakhe. Njengokuba umama ndakhala phezu kwakhe, le cat angazishiyi ubawo. Xa kwafika ambulensi, Mommas oluhamba emva naphambili wemba neenzipho zakhe kwikhaphethi nangaliphi na iinzame ukwenza intshukumo yakhe.
ekugqibeleni, Umama wam UDaniela yakhe kwigumbi lokulala ukuze abalindi bakwazi ukuthatha fatherís wam umzimba.
Emva kokufa kwam fatherís, Mommas sathanda imini umama wam nobusuku, onke amaxesha kunzima. Wenza indlu ngathi ngaphantsi ulilolo. Ephulaphule yakhe, Mommas wanceda ukudambisa iinkumbulo ezibuhlungu. Nanini umama okanye ndakhala, Mommas ngomonde wahlala ecaleni kuthi, amphakamisele paw ukuyiphatha ngengalo okanye ngesandla, kwaye walenca iinyembezi ebusweni bethu ukuba usazise yena kufuphi.
Wahlala cwaka kakhulu ukwenzela ukuba asiphazamise; wayebonakala ukwazi ukuba kwakufuneka buhlungu. Emva kokuba wayeka bedanduluka, Mommas kuza kuqalisa kangangoko, eyona shushu purr. Ngoko sheíd sikhwele enye kwijim zethu. Ndiya donít ndiyazi ukuba mna nomama wam kwaye ngesifumene ngokusebenzisa kuloo maxesha ngaphandle Mommas.
Phantse unyaka emva fatherís kokufa kwam, Mommas wagula hyperthyroidism. Ngaphandle unyango lomhlaza eninzi kunye namayeza, ukuze angafi. Asizange mathidala amnyamekele. Siye couldnít ingaphulukana ngoku.
Emveni kwakho konke, waba lilungu lentsapho yethu. Njengoko waqalisa ukudlulisela iponti emva phawundi, sasebenza zihlala kunye Mommas ukuqinisekisa utye ukutya engaphezulu ukugcina ubunzima yakhe. ekugqibeleni, yena kasikrobana ukusuka nani yakhe eqhelekileyo-iponti elinambini ukuya ngeekhilogram ezisixhenxe ezincinane. Xa sagqiba ukuba naye ukuya vet unyango kwimitha, abasebenzi wasixelela theyíd zange ndibone umntu ikati ezifana Mommas; yena waba impilo engcono kunezinye izigulane kule ubunzima. Ngosuku kunyango lwakhe, Mommas wanamathela zonke yoochwephesha akube, purring wazithi ubabonise yakhe.
Ndinombulelo ukuthi Mommas wabuyela kwimpilo entle. ngelishwa, siye salahlekelwa Persephone ukuya seswekile ebudaleni kulo nyaka. Akuqhelekanga ukubukela Mommas abambelele kakuhle njengoko abaninzi kangaka kudlula ngaphambi kokuba. Ngoku intloko lwekhaya kuquka izinja ezimbini ezinkulu Sayithimba evela ezitratweni. Kwakhona ngoku Dutchess, yikati entsha umfana lowo kwanabo bangahoyekanga. Dutchess ebukele Mommasís kwinto yonke, ukufunda indlela yokwenza, apho ukuya, kwaye atye ntoni.
Mommas ashiywe kakhulu. Yena ukubhitya kakhulu ngoku, yaye neenwele zakhe uphelelwe uninzi inkazimlo yayo. Yena cwaka nesiqulatho ukuze uhlale elangeni ngexesha nokuzilungisa uboya bayo. Nangona ndiyazi ixesha lam naye Lijongene, Ndiye ndizame ukucinga ngayo. kunokuba, Ndinikela ingqalelo kwizinto Mommas indifundise. Ndiye ndafunda ngaphezulu kule ikati ngothando olungenamiqathango, intlonipho, kunye nemfanelo zosapho kunaye nabani na ongomnye. Ebinazo luthando ukuba akukho mazwi achaza ngokwaneleyo.
Ngaphezu kwayo yonke enye into, Mommas na isizathu mna ndibe Igcisa lolwazi lwezilwanyana. Yena iyandinceda nabakulangazelelayo enam nzulu kwaye abayixabisileyo. Ndifunda ukunyamekela abo bathetha bokubandezeleka kwabo, ngubani ngokuzola badla nathi kwaye ucele kuphela uthando lwethu imbuyekezo.
Ukunyaniseka kumhlobo wokwenene kungaba yenye ubunewunewu ebomini.
Kukho abanye, isilwanyana okanye ngabantu, abeva iintlungu kwaye kufuneka ukuba ecaleni kwabo?